NISA oo sheegtay in ay ka hortageen Weerar lagu qaadi lahaa Xarunta Xalane ee AMISOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliyaha Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed, Janaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa shaaca ka qaaday in ay fashiliyeen Weerar qorsheysnaa oo la doonayay in lagu qaado Xarunta Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Janaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa sheegay in Xubno ka tirsan Al Shabaab oo watay Gaari ay doonayeen in madaafiic ay ku weeraraan Xarunta AMISOM ee Magaalada Muqdisho balse laga hortagay sida uu hadalka u dhigay.
“ Waxuu ahaa weerar qorsheysan balse waxaa ku baxay Ciidamada Nabad Sugidda iyo kuwa AMISOM, weyna ka fashiliyeen Weerarkaasi” ayuu yiri Taliyaah.
Wararka ayaa sheegaya in Al Shabaab ay tiro maadaafiic ahaa ay ka soo tuureen Degaanka Jazeera ee Duleedka Magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo haatan lama soo sheegin wax khasaaro ah oo ka dhashay Madaafiicdan oo ay soo tuureen Dagaal yahano ka tirsan Xarakada Al Shabaab.